Syberia na Syberia 2, na-ere maka obere oge Mac App Store | Esi m mac
Egwuregwu ndị ahụ Syberia y Syberia 2 na-ere na obere oge na Mac App Store naanị 1,99 egwuregwu ọ bụla. Ọnụahịa ndị egwuregwu ndị a na-abụkarị 11,99 y 14,99 n’otu n’otu, yabụ n’ihe na-erughị euro ise nnukwu egwuregwu abụọ a nwere ike ịbụ nke gị. Egwuregwu abụọ ahụ abanyela kpamkpam español.
N'ime egwuregwu abụọ ị nwetara n'okpuru akpụkpọ gị Kate onye ije, onye ọka iwu na-eto eto ma nwee nnukwu ọchịchọ si New York, ebe akụkụ mbụ ya nyere ya ihe na mbụ dị ka ọrụ dị mfe: nkwụsị ọsọ ọsọ iji jikwaa ire ochie ụlọ ọrụ automaton na-ezo na ndagwurugwu Alpine ma laghachi n'ụlọ ha na United States, ma ihe adịghị ka ha dị.
Na akụkụ nke abụọ, ị na-amalite njem ọhụrụ ịchọta ikpeazụ nke akụkọ banyere mammoths nke Syberia n’ime obi elu igwe echefuru echefu, ebe ihe omimi di egwu g’eme.
Ihe odide na-adọrọ mmasị na enigmatic.
Akụkụ igwefoto cinematic, mmegharị na nhazi.
Ọnọdụ pụrụ iche na enweghị atụ.
Akụkọ mbụ na-adọrọ mmasị.
Ihe odide ohuru bara ọgaranya ma na-akpali akpali na gburugburu 3D dị ọhụrụ na nkọwa zuru ezu.
Ofụri Esịt ike mbụ egwuregwu mgbagwoju anya nke ga-anwale egwuregwu 'nkà site na play.
Nwere ike ịzụta set nke Syberia kpọmkwem site Mac App Store, site na ịpị njikọ ndị a.
Nwere ike ịzụta set nke Syberia 2 kpọmkwem site Mac App Store, site na ịpị njikọ ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Egwuregwu » Syberia na Syberia 2, na-ere maka obere oge Mac App Store
Na-akụda mmụọ, nke a bụ atụmatụ mmegharị iPhone nke Apple bidoro na Spain